ERROR NATORRENT, DISKI GBAJIRI AGBAWA: MKPUCHI DISK KPUCHIE 100% - UTORRENT - 2019
Mgbe ị na-arụ ọrụ ngwa ngwa, ọtụtụ njehie nwere ike ime, ma ọ bụ nsogbu na mbido nke usoro ihe omume ma ọ bụ nkwenye zuru oke nke ịnweta. Taa, anyị ga-agwa gị otu esi edozie onye ọzọ nke njehie uTorrent. Ọ bụ ihe gbasara nsogbu na mkpuchi na ịkọ akụkọ. "Oghere nchịkọta kpuchie 100%".
Esi edozi njehie uche na uTorrent
Iji nwee ike ịchekwa ozi ọma na draịvụ ike gị ma budata ya na-enweghị ihe mgbochi, enwere cache pụrụ iche. Ọ na-ebu ihe ọmụma nke na-enweghị oge iji kwadoo ya. Njehie ahụ a kpọtụrụ aha na aha ahụ na-apụta na ọnọdụ mgbe cache a jupụtara, na ịchekwa ihe nchekwa data ka dịka ihe efu. Ị nwere ike idozi nke a n'ọtụtụ ụzọ dị mfe. Ka anyị leruo nke ọ bụla n'ime ha anya.
Usoro 1: Mee ka Cache mụbaa
Usoro a bụ nke kachasị mfe ma dị irè nke ihe niile a chọrọ. Maka nke a, ọ dịghị mkpa inwe nkà pụrụ iche ọ bụla. Naanị ị ga - eme ihe ndị a:
Gbaa na kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ uTorrent.
N'ebe kachasị n'usoro ihe omume ahụ, ịchọrọ ịchọta mpaghara a na-akpọ "Ntọala". Pịa na akara a ozugbo na bọtịnụ òké aka ekpe.
Mgbe nke ahụ gasịrị, menu ga-apụta. N'ime ya, ịkwesịrị ịpị akara "Ntọala Mmemme". Ọzọkwa, enwere ike ịrụ otu ọrụ ahụ site na iji nchịkọta dị mfe "Ctrl P".
N'ihi ya, windo ga-emepe na ntọala niile. N'akụkụ aka ekpe nke windo ahụ meghere, ịkwesịrị ịchọta akara "Di elu" ma pịa ya. N'okpuru ebe a, a ga-enwe ndepụta nke ntọala nested. Otu n'ime ntọala ndị a ga-abụ "Caching". Pịa bọtịnụ òké aka ekpe na ya.
A ghaghị ime ihe ndị ọzọ n'akụkụ aka nri nke windo ntọala. N'ebe a, ị ga-etinye akara n'ihu akara ahụ anyị hụrụ na nseta ihuenyo dị n'okpuru ebe a.
Mgbe enyocha igbe achọrọ, ị ga-enwe ike iji aka dee ezipụta oghere. Malite na megabytes 128 dị. Na-esote, tinye ntọala niile maka mgbanwe ndị na-emetụta. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ na ala nke windo ahụ. "Tinye" ma ọ bụ "OK".
Mgbe nke ahụ gasịrị, na-agbaso ọrụ nke uTorrent. Ọ bụrụ na njehie ahụ gosipụtara ọzọ, mgbe ahụ ịnwere ike iwelie obere oghere ntakịrị. Ma, ọ dị mkpa ka ị ghara ịkwụsị uru a. Ndị ọkachamara adịghị akwado ịtọ uru cache na uTorrent na ihe karịrị ọkara nke RAM gị niile. N'ọnọdụ ụfọdụ, nke a nwere ike ime ka nsogbu dị iche iche bilite.
Nke ahụ bụ ụzọ dum. Ọ bụrụ na ị na-eji ya, ị gaghị edozi nsogbu nke cacheloadload, mgbe ahụ na mgbakwunye, ị nwere ike ịnwa ime omume ndị e depụtara na nke a n'ọdịnihu.
Nzọụkwụ 2: Nbudata ngwa ngwa ma bulie ngwa ngwa
Ihe kachasị mkpa nke usoro a bụ iji kpachapụ anya nbudata ngwa ngwa na bulite data nke ebudatara site na uTorrent. Nke a ga-ebelata ibu na draịvụ ike gị, nke a ga-ewepụkwa njehie ahụ mere. Nke a bụ ihe ị ga - eme:
Na-agba ọsọ naTorrent.
Pịa igodo nchikota na keyboard "Ctrl P".
Na windo meghere na ntọala, anyị na-ahụ taabụ ahụ "Ọsọ" ma banye n'ime ya.
Na nhọrọ a, anyị nwere mmasị na nhọrọ abụọ - "Ọsọ ọsọ ọsọ" ma "Ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ". Site na ndabara, na iNorrent ma ụkpụrụ nwere oke «0». Nke a pụtara na a ga-ebugo data na oke ọsọ ọsọ. Iji mee ka belata ibu na diski ike, ị nwere ike ịnwa ibelata ọsọ ọsọ na nlọghachi ozi. Iji mee nke a, ịkwesịrị ịbanye na njirimara gị n'ọhịa akara na onyinyo dị n'okpuru ebe a.
Ọ bụghị kpọmkwem ihe ị chọrọ iji napụta. Ihe niile dabere na ọsọ nke onye na-eweta gị, na ihe nlereanya na ọnọdụ nke diski ike, nakwa dị ka ọnụ ọgụgụ RAM. Ị nwere ike ịnwa ịmalite na 1000 ma jiri nke nta nke nta mụbaa uru a ruo mgbe njehie ahụ gosipụtara ọzọ. Mgbe nke ahụ gasịrị, ekwesịrị ịdata ala ọzọ. Biko mara na n'ọhịa ị ghaghị ịkọwa uru na kilobytes. Cheta na 1024 kilobytes = 1 megabyte.
N'igosi uru bara uru a choro, echefukwala itinye ntinye ohuru. Iji mee nke a, pịa na ala nke windo ahụ "Tinye"na mgbe ahụ "OK".
Ọ bụrụ na njehie ahụ apụla, ịnwere ike iwelie ọsọ. Mee nke a ruo mgbe njehie ahụ laghachiri. Ya mere ị nwere ike ịhọrọ onwe gị nhọrọ kachasị mma maka ọsọ kachasị dị.
Nke a mezue usoro. Ọ bụrụ na enweghi ike idozi nsogbu ahụ ma n'ụzọ dị otú a, ịnwere ike ịnwale nhọrọ ọzọ.
Nzọụkwụ 3: Kwusaa Ozi
Site na usoro a, ị nwere ike ịbelata ibu na diski ike gị. Nke a, n'aka nke ya, nwere ike inyere aka dozie nsogbu nke arụ ọrụ cache. Omume ga-adị ka nke a.
Pịa bọtịnụ bọtịnụ ọzọ. "Ctrl P" na keyboard iji meghe windo ntọala.
Na windo meghere, gaa na taabụ "General". Site na ndabara, ọ bụ na ebe mbụ n'ime ndepụta ahụ.
N'okpuru ala nke taabụ nke meghere, ị ga-ahụ akara "Kesaa faịlụ niile". Ọ dị mkpa itinye akọrọ n'akụkụ mpaghara a.
Mgbe nke ahụ mechara pịa bọtịnụ ahụ "OK" ma ọ bụ "Tinye" dị n'okpuru. Nke a ga-enye ohere ka mgbanwe gbanwee.
Ọ bụrụ na ibudatara faịlụ ọ bụla na mbụ, anyị nwere ike ikwu na iwepu ha site na listi na ihichapu ozi ebudatara na diski ike. Mgbe nke ahụ gasịrị, malite ibudata data ọzọ site na iyi ahụ. Nke bụ eziokwu bụ na nhọrọ a na-enye ohere ka usoro ahụ nwee ike ịnyefe ohere ha ozugbo tupu ha ebudata faịlụ. Mbụ, omume ndị a ga-enye gị ohere izere diski ike disk, na nke abụọ, iji belata ibu na ya.
Na ya usoro akọwapụtara, n'ezie, yana isiokwu, wee kwụsị. Anyị nwere olileanya n'ezie na ị nwere ihe ịga nke ọma, n'ihi ndụmọdụ anyị, iji dozie ihe isi ike ndị dị na nbudata faịlụ. Ọ bụrụ na ị ka nwere ajụjụ mgbe ị gụsịrị isiokwu ahụ, jụọ ha ihe ndị ahụ. Ọ bụrụ na ị na-eche mgbe niile ebe ebido arụ ọrụ na kọmputa gị, mgbe ahụ, ị ​​ga-agụ isiokwu anyị, nke zara ajụjụ gị.
Gụkwuo: Ebee ka ọ bụTorrent arụnyere?